Oge nke ụbọchị maka Jenụwarị 21: akụkọ banyere Sant'Agnese | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla banyere onye nsọ a belụsọ na ọ dị obere - 12 ma ọ bụ 13 - mgbe ọ nwụrụ n'ihi okwukwe ya na ọkara ikpeazụ nke narị afọ nke atọ. A na-atụ aro ụzọ dị iche iche nke ọnwụ: isi, ọkụ, ịgba olu.
Akụkọ mgbe ochie kwuru na Agnes bụ nwa agbọghọ mara mma nke ọtụtụ ndị ntorobịa chọrọ ịlụ. N’etiti ndị jụrụ, otu kọọrọ ya ndị isi maka na ọ bụ Onye Kraịst. E jidere ya ma kpọchie ya n'ụlọ akwụna. Akụkọ a gara n'ihu na otu nwoke lere nwanyị anya n'ọchịchọ, ọhụhụ ụzọ ma mee ka ekpughachi ya site n'ekpere ya. A mara Agnes ikpe, gbuo ya ma lie ya n'akụkụ Rome na nnukwu ọgba aghara nke mechara were aha ya. Ada Constantine wuru basilica iji kwanyere ya ugwu.
Dị ka nke Maria Goretti na narị afọ nke iri abụọ, n'ihi okwukwe nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke egosipụtawo n'ụzọ doro anya ọha mmadụ na-erubere ọhụụ nke ịhụ ihe onwunwe n'anya. Ọbụna dị ka Agatha, onye nwụrụ n'ọnọdụ yiri nke a, Agnes bụ akara ngosi na ịdị nsọ adịghị adabere n'ogologo afọ, ahụmịhe ma ọ bụ mbọ mmadụ. Ọ bụ onyinye Chineke nyere mmadụ niile.
Sant'Agnese bụ onye nchebe nke:
Nwa agbọghọ Scout